Nezve - Wavelength Opto-Electronic (S) Pte Ltd
20 makore echiitiko chephotonics
Lasers & Detector
Sales mitemo & mamiriro
1. KUBVUMA KWEMASHOKO
NHHAMO (NHAMO) inogamuchira maodha netsamba, foni, fax kana e-mail. Maodha ese ari pasi pekugamuchirwa neWOE. Maodha anofanirwa kusanganisira Kutenga Odha Nhamba uye kutsanangura nhamba dzeWOE katalogi kana zvizere ruzivo rwechero chakakosha zvinodiwa. Maodha akaiswa nerunhare anofanirwa kusimbiswa nekutumirwa kweyakaoma kopi Purchase Order. Kutumirwa kwePurchase Order kunosanganisira kugamuchirwa kwe WOE Mitemo neMamiriro Ekutengesa, akanyorwa pano uye mune chero Kotesheni inopiwa neNHAE.
IYI ZVITEMO NEZVINHU ZVINHU ZVINOCHAVA ZVINO ZVINOGONA UYE ZVAKASIYANA MITEMO YEKUVAKA PAKATI PAMUTENZI NENHAMO.
2. ZVINOGONESESA ZVEMAITI
Izvo zvinotsanangurwa zvakapihwa muWOE katalogi, zvinyorwa, kana mune chero zvinyorwa zvakanyorwa zvinotarisirwa kuve zvakarurama. Nekudaro, WOE inochengetera kodzero yekuchinja zvakatemwa uye haina chirevo pamusoro pekukodzera kwezvigadzirwa zvayo kune chero chinangwa chinangwa.
3. KUCHINJWA KWEZVINHU NEZVINHU
WOE inochengetera kodzero (a) kuita shanduko muZvigadzirwa pasina chiziviso uye chisungo chekubatanidza shanduko idzodzo mune chero Zvigadzirwa zvakambounzwa kuMutengi uye (b) kutumira kune Mutengi Chigadzirwa chazvino zvisinei nerondedzero yekatalogi, kana zvichibvira.
4. MUTENGI ANOCHINJWA KUMAORDERA KANA ZVINHU
Chero shanduko kune chero odha yetsika kana sarudzo yakagadziriswa Zvigadzirwa, kana chero kurongeka kana nhevedzano yeodha dzakafanana dzeZvigadzirwa zvakajairwa kusanganisira asi zvisingaganhurirwe kune chero shanduko kune zvakatemwa zveZvigadzirwa, zvinofanirwa kubvumidzwa pamberi nekunyora neWOE. NHEMA inofanira kugamuchira chikumbiro cheMutengi chekuchinja mazuva angangoita makumi matatu (30) zuva rakarongwa rekutumira risati rasvika. Muchiitiko chekuchinja kune chero kurongeka kana zvakatemwa zve
Zvigadzirwa, WOE inochengetera kodzero yekugadzirisa mitengo uye mazuva ekutumira eZvigadzirwa. Pamusoro pezvo, Mutengi achave nemutoro wemitengo yese ine chekuita neshanduko yakadai inosanganisira, asi isina kuganhurirwa, mutengo wakaremerwa wezvese zvigadzirwa, basa ririkuitika uye rakapedzwa zvinhu zvekutengesa paruoko kana kuodha izvo zvinokanganiswa nekuchinja kwakadaro.
Chero odha yetsika kana sarudzo yakamisikidzwa Zvigadzirwa, kana chero odha kana nhevedzano yeodha yakafanana yeZvigadzirwa zvakajairika inogona kukanzurwa chete kana WOE yatanga yabvumwa, iyo mvumo inogona kupihwa kana kunyimwa mukuda kweWOE chete. Chero kudzima odha, Mutengi achave nemutoro wemitengo yese ine chekuita nekukanzurwa kwakadaro kunosanganisira, asi kwete kuganhurirwa, mutengo wakaremerwa wezvese zvigadzirwa, basa ririkuenderera uye rakapedzwa zvinhu hedheni paruoko kana kuodha izvo zvinokanganiswa nekukanzurwa kwakadaro WOE ichaita. shandisa nhamburiko dzine mufungo dzokutengeserana kuderedza miripo yekudzima kwakadaro. Pasina chiitiko Mutengi achave nemhosva inodarika mutengo wekondirakiti wezvakadzimwa Zvigadzirwa.
Catalog mitengo inogona kuchinja pasina chiziviso. Mitengo yetsika inogona kuchinjwa nechiziviso chemazuva mashanu. Kukundikana kupikisa kushanduka kwemutengo pane hurongwa hwetsika mushure mekuzivisa kuchaonekwa sekugamuchirwa kwekuchinja kwemutengo. Mitengo ndeyeFOB Singapore uye haisanganisire zvekutakura, basa uye mari yeinishuwarenzi. Mitengo yakataurwa inosarudzika, uye mutengi anobvuma kubhadhara, chero yemubatanidzwa, yenyika kana yemuno mutero, kutengesa, kushandisa, pfuma yemunhu kana chero mumwe mutero. Mitengo yakatorwa inoshanda kwemazuva makumi matatu, kunze kwekunge yataurwa neimwe nzira.
WOE inovimbisa kurongedza kwakakodzera uye inotumira kune vatengi neimwe nzira yakasarudzwa neWOE, kunze kwekunge yatsanangurwa neimwe nzira muBuyer's Purchase Order. Mushure mekugamuchirwa kweodha, WOE ichapa zuva rinofungidzirwa rekutumira uye ichashandisa zvakanakisa kuedza kuzadzisa yakatarwa zuva rekutumira. WOE haina mhosva kune chero mhedzisiro kukuvara kunokonzerwa nekunonoka kuendesa. WOE inozivisa Mutengi nezve chero inofungidzirwa kunonoka mukutakura. WOE inochengetedza kodzero yekuendesa mberi kana kurongazve, kunze kwekunge Mutengi ataura zvimwe.
Singapore: Kunze sekutsanangurwa neimwe nzira, mubhadharo wese unofanirwa uye unobhadharwa mukati memazuva makumi matatu kubva pazuva reinivhoyisi. nhamo ichabvuma kubhadhara neCOD, Cheka, kana account yakatangwa neWOE. MaOdha Epasi Pose: Maodha ekutumira kune Vatengi vari kunze kweSingapore anofanira kubhadharwa zvizere nemadhora ekuUS, newaya kana netsamba isingachinjike yechikwereti yakapihwa nebhangi. Kubhadhara kunofanirwa kusanganisira mari dzese dzakabatana. Tsamba yechikwereti inofanirwa kushanda kwemazuva makumi mapfumbamwe.
Zvigadzirwa zveStock: WOE stock optical zvigadzirwa zvinotenderwa kusangana kana kudarika zvakatemwa zvakatemwa, uye kuti ive isina hurema mune zvinhu kana basa. Waranti iyi ichashanda kwemazuva makumi mapfumbamwe kubva pazuva reinvoice uye iri pasi peReturn Policy yakanyorwa muMitemo neMamiriro aya.
Tsika Zvigadzirwa: Zvigadzirwa zvakanyanya kugadzirwa kana zvetsika zvinotenderwa kuti ive isina hurema hwekugadzira uye kusangana nezvako zvakanyorwa chete. Warrandi iyi inoshanda kwemazuva makumi mapfumbamwe kubva pazuva reinvoice uye iri pasi peReturn Policy yakanyorwa muMitemo neMamiriro aya. Zvisungo zvedu pasi peizvi wmaarranties achaganhurirwa pakutsiva kana kugadzirisa kana kupihwa kune Mutengi kiredhiti maererano nekutenga mune ramangwana mumari yakaenzana nemutengo wekutenga wechigadzirwa chakaremara. Hapana chiitiko isu tichava nemhosva yechero chiitiko kana chinokonzeresa kukuvadza kana mutengo kubva kuMutengi. Mishonga yambotaurwa ndiyo yega uye yakasarudzika mushonga weMutengi kune chero kutyorwa kweWaranti pasi pechibvumirano ichi. Iyi Standard Warranty haizoshande kune chero chigadzirwa icho, kana chaongororwa neWavelength Singapore, chinoratidza humbowo hwekukuvadzwa nekuda kwekushungurudzwa, kushandiswa zvisizvo, kubata, kuchinjwa, kana kuiswa zvisina kunaka kana kushandisa, kana chero zvimwe zvikonzero zvinopfuura kutonga kweWavelength. Singapowo.
10. DZOSE POLICY
Kana Mutengi achitenda kuti chigadzirwa hachina kukwana kana kuti chisina kusangana ne WOE yakataurwa, Mutengi anofanira kuzivisa nhamo mukati memazuva makumi matatu kubva pazuva reinvoice uye anofanira kudzorera zvinhu mukati memazuva makumi mapfumbamwe kubva pazuva reinivhoyisi. Chigadzirwa chisati chadzoka, Mutengi anofanira kuwana RETURN AUTHORIZATION MATERIAL NUMBER (RMA) Hapana chigadzirwa chichagadziriswa pasina RMA. Mutengi anofanira kubva arongedza chigadzirwa nemazvo ochidzosera ku WOE, nekutakura prepaid, pamwe chete RMA Chikumbiro Fomu. Chigadzirwa chakadzoserwa chinofanira kunge chiri mupakeji yepakutanga uye isina chero kukanganisa kana kukuvadzwa kunokonzerwa nekutumira. Kana WOE ikaona kuti chigadzirwa hachizadzise zvakatarwa mundima 7 yezvigadzirwa zvemasheya;
INE nhamo, pasarudzo yayo chete, kudzorera mutengo wekutenga, kugadzirisa chakakanganisika, kana kutsiva chigadzirwa. Pamusoro pekusarudzika kweMutengi, zvinotengeswa hazvigamuchirwe pasina mvumo; Zvinhu zvinotenderwa zvakadzoserwa zvichaiswa pasi pekubhadharisa restocking; Zvinhu zvakaodha, zvakasakara kana zvechinyakare zvakagadzirwa hazvidzoserwe.
Chero Kodzero dzeIntellectual Property pasi rose, kusanganisira, pasina kuganhurirwa, zvigadzirwa zvinogoneka (zvichida kana zvisina kunyorerwa), patent, kodzero dzepatent, kodzero, basa reunyori, kodzero dzetsika, zviratidzo, chiratidzo chebasa, mazita ekutengeserana, kutengeserana hembe zvakavanzika zvekutengeserana. uye zvese zvikumbiro nekunyoreswa kwezvese zviri pamusoro zvichibva mukuita kweMitemo Yekutengesa iyi inonambwa, yakagadziridzwa, yakawanikwa kana kuderedzwa kuti iitwe neNHAMO, ichave iyo yakasarudzika pfuma yeNHAMO. Kunyanya, nhamo ichave yega kodzero dzese, zita uye kufarira mukati uye kune Zvigadzirwa uye chero uye zvese zvigadzirwa, mabasa ehunyori, marongero, kuziva-sei, mazano kana ruzivo rwakawanikwa, rwakagadzirwa, rwakagadzirwa, rwakagadzirirwa kana kuderedzwa kuita, neWOE. , mukati mekuita kweMitemo Yekutengesa iyi.
Kana iwe uine account pane ino saiti, unogona kukumbira kuti ugamuchire faira rakatumirwa re data rako pachako ratinobata nezvako, kusanganisira chero data rawakatipa. Iwe unogona zvakare kukumbira kuti tidzima chero data rako pachako ratinobata pamusoro pako. Izvi hazvisanganisi chero data yatinosungirwa kuchengetedza yekutonga, yemutemo, kana kuchengetedza zvinangwa. Unobvumawo kutibvumira kuti tibatane newe kuburikidza nechero nzira (kureva email, nhamba yefoni) chero chinangwa.
© 2022 - Wavelength Opto-Electronic - Iyo ISO 9001 Certified Kambani
Laser Optics • Nhoroondo ye IR Optics • Kufungidzira Optics • Molded Optics • Lasers & Detector • Systems & Software
Tsvaga Zvigadzirwa NemaApplication
Chikafu & Packaging Inspection
LiDAR YeMotokari Yemotokari
Kurapa Laser Kurapa
Nyorera kune yedu tsamba.
Nhoroondo ye IR Optics
Optical Calculator ikozvino pa:
Batanidza nesu pa:
Tishanyire paLaser Korea 2022, Booth: 4C24
Nyowani chalcogenide zvinhu runyorwa yakawedzerwa muIR Optics> IR Chikamu
Iyi webhusaiti inoonekwa zvakanyanya neChrome/Firefox/Safari.
Iyi webhusaiti inopindura nhare, asi inotariswa zvakanyanya nedesktop